Atsaharo ny malware indray mandeha ary ho mandrakizay amin'ny fanarahana torohevitra tsotra azo omena amin'ny Semalt
Ny aretina dia mety miteraka fatiantoka sy simba. Ao amin'ny tontolon'ny raharaham-barotra, ireo mpikomy dia manandrana tromba maro hangalarana vola, sekretera ara-barotra ary fampahalalana izay afaka mahasoa azy ireo. Ny fitaovana fiarovana tahaka ny Antivirus, firewall, ary ny fanoratana mailaka dia mitana anjara toerana lehibe amin'ny fanakanana ny fanafihana malware.
I Ivan Konovalov, Semalt Mpitarika Success Successor, dia milaza fa misy fomba hackers afaka mandalo ireo fepetra ireo. Matetika izy ireo no mifantoka amin'ny mpiasa mba hahitana fomba iray amin'ny rafitra iray. Soa ihany, raha toa ka mandray ireto hetsika manaraka ireto ny mpikambana ao amin'ny staff, dia hampihena ny fahalalahany amin'ny fanafihana malware. 1. Fantaro ny fahavalo
Fampandrenesana an-tserasera sy adiresy vohikala dia zava-misy eo amin'ny fiainana an-tserasera. Ny hackers dia nanangona fotoana lehibe tamin'ireo fomba roa ireo. Ny fampitandremana sy ny dokambarotra ataon'izy ireo matetika dia aseho amin'ny fomba mahery vaika sy amin'ny teny maneso. Ny dokam-barotra dia mivarotra fifanarahana izay tsara tarehy. Ny popup matetika dia mampitandrina amin'ny fahadisoana iray izay mila fiatraikana maika ary mandefa ny mpiasa hisintona fitaovana fanamboarana.
Ireo adverts sy pop-ups ireo dia manafina rohy mankany aminà rindrambaiko sy tranonkala malaza. Raha vao mampiasa rohy toy ny mpampiasa iray dia afaka manala ny finday ny malware. Ny Biraon'ny Sekoly momba ny Fiarovana ao amin'ny Northeastern University dia manoro hevitra fa tokony hisoroka ireo varavarankely popup ireo ny mpiasa ary tsindrio fotsiny amin'ny rohy ara-dalàna.
2. Mitandrema amin'ny rohy hafahafa sy ny fitaovana
Araka ny filazan'ny MakeUseOf, ny mpampiasa dia tsy tokony hiantsoroka na hanokatra rohy izay tsy azo ihodivirana ny fiaviany sy ny lanjany..Raha ny ankamaroan'ny serivisy mailaka dia hivezivezy eo amin'ny fitaovana ho an'ny malware, ny mpiasa dia afaka manatsara ny fiarovana amin'ny alàlan'ny fisorohana sy ny fifandraisana tsy misy fangarony.
3. Fikarakarana fitaovana fitehirizana externe
Ankehitriny sy avy eo dia azo alefa ny solosaina avy amin'ny ordinatera iray hafa amin'ny alalan'ny fitaovana maro samihafa avy amin'ny USB flash drive, karatra meme, drôna mafy hafa sy fitaovana hafa. Ireo fitaovana fitehirizana ireo dia matetika nozaraina ary afaka mitondra malware amin'ny solosaina iray amin'ny iray hafa. Alohan'ny hanokafana ny rakitra, alaharo ireo fitaovana fitahirizana hamantarana ny malware araka ny soratan'i MakeUseOf.
4. Raha toa ka tsara loatra ilay fifanarahana
Manintona foana ny olona ny fahalalahana. Lalao malalaka, rindrambaiko, mozika ary sarimihetsika dia ny ankamaroan'ny mpihazakazaka hampiasa ny malware amin'ny ordinatera maro. Ny ankamaroan'ny tranonkala izay maimaim-poana maimaim-poana dia manimba ny maloto ao amin'ny rafitra. Ny birao misahana ny fiarovam-baovaon'ny Anjerimanontolon'i Northeastern dia manohana ny famoahana tranonkala azo itokisana mba hampihenana izany loza izany.
5. Aza kivy amin'ny mailaka phishing
Ny mailaka fanesorana dia natao hamokarana fampahalalana sasantsasany avy amin'ny mpandray izay mampiasa tetika isan-karazany. Ireo mpanoratra ireo mailaka ireo dia afaka milalao lalao marary mba hahazoana fitokisana na hampiasa fomba fitenenana tahaka ny nahazoanao loteria mba hampirisihana ny mpiasa hamoaka tsipiriany toy ny fampahalalana momba ny karatra. Ny tanjon'izy ireo dia miovaova amin'ny fahaiza-manao sy ny teknika.
Ny mpiasa dia tokony hanajanona mailaka avy amin'ireo mpanolotra tsy fantatra. Ho an'ny mailaka izay vakian'ny mpikambana dia mila mihaino ny fampahalalana izy ireo raha toa ka nokapohina ilay mpandefa.
6. Alefaso HTML amin'ny mailaka
HTML dia afaka manokatra scripts. Raha toa ka misokatra ny mailaka iray dia atahorana ny ordinatera. Mba hisorohana an'io loza io dia afeno ny endri-javatra HTML amin'ny mailaka. Raha mila mampiasa HTML ny mpiasan'ny mpiasa dia tokony ho azony antoka fa avy amin'ny loharano azo itokisana ny mailaka Source .